कोरोनाले दिएको पीडाबाट व्यवसायलाई उठाएर अघि लैजाँदै छौं | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
१३ भाद्र २०७७, शनिबार १४:३३
म इन्जिनियरिङको विधार्थी हुँ । अहिले स्किल सेवामा अपरेटिभ अफिसरका रूपमा काम गर्छु । एक वर्षअघि साथीहरूसँग मिलेर आफूले पढेको क्षेत्रमा केही गरौं भनेर यसको सुरुवात गरिएको हो । स्किल सेवाबाट हामी होम इन्स्पेक्सन र रिनोभेटको काम गर्छौं । जसरी डक्टरले रोग पत्ता लगाएर उपचार गर्नुहुन्छ । हामीले पनि त्यसरी नै वैज्ञानिक र इन्जिनियरिङ प्रविधिबाट घरको सिपेज, लिकेज, प्लम्बिङ, पेन्टिङ गर्नुका साथै सबै घरको सम्पूर्ण चेकजाँच गर्छौं । त्यसमा आएको समस्यालाई वैज्ञानिक ढंगले समाधान गर्न के कुरामा खराबी छ त्यो पत्ता लगाई मरम्मत गर्ने गर्छौं । हामीले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरमा आफ्नो सेवा दिराखेका छौं ।
एक वर्ष मात्रै भएको थियो हामीले काम सुरु गरेको कहाँबाट यो कोरोना आइपुग्यो । अनि यसले हामो काममा नयाँ चुनौती र पीडा थपिदियो । चैतमा भएको लकडाउनसँगै हाम्रो काम ठप्प भयो । काम भइहेको ठाउँमा पनि लकडाउनले गर्दा आधामा नै काम रोक्नुपर्यो । कतिले त बुझ्नुभयो तर कोही त रिसाउनु पनि भयो । हामीलाई यसरी सबै ठप्प नै होला भनेर लागेको पनि थिएन ।
बन्दको केही हप्तापछि भर्खरै थालेको काम बन्द भएकोले म फ्रस्टेट नै भए । म पूर्णरूपमा यही व्यवसायमा आश्रित थिए । यसबाहेक अरू कामको बारेमा सोचेको पनि थिइनँ । जति बेला दिक्क र नरमाइलो लाग्थ्यो । ‘कस्तो केही गरूँ भन्ने बेला यो कोरोना आइलाग्यो’ भन्ने कुरा मात्र मनमा खेली रहन्थ्यो । फेरि यो मलाई मात्र परेको होइन संसारलाई नै परेको छ भन्ने पनि लाग्थ्यो । मन केही सम्हालिन्थ्यो ।
लकडाउनअघि स्किल सेवालाई अझै अघि लैजाने सोचमा थियौं । मार्केटिङका योजनाहरु थिए । इन्भेष्ट पनि गरेका थियौं खेर गयो जस्तो लागिरहन्थ्यो । म मात्र होइन साथीहरू पनि निराशाजनक कुराहरू गर्थे । त्यसपछि मलाई निराशावादी होइन आशावादी हुनुपर्छ भन्ने कुरा मनमा आयो । आशावादी भएर कर्ममा लाग्यो भने संसार जित्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो । त्यसपछि त आफूलाई सम्हाल्ने मात्र होइन सँगै काम गर्ने साथीभाइलाई पनि सम्झाउन थाले । उनीहरूको मनोबल घट्न दिइन ।
त्यो बेला कति साथीहरू त अब के गर्ने ? के हुन्छ हाम्रो काम त ठप्पै भयो त ? अरू केही गर्ने हो कि ? पनि भन्थे । मलाई भने मनमा के विश्वास थियो हाम्रो व्यवसाय त लकडाउन खुलेसँगै सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो । त्यसै आत्मबलका साथ बसें । अनि हामी सबै साथीहरू मिलेर बाँकी रहेका डकुमेन्टेसनका कामहरू यो लकडाउनको अवधिमा सिद्ध्याउनलाई काम गर्न थाल्यौं । प्रविधिले गर्दा घरमै बसेर ती कामहरू सहजै गर्न सकियो । भरचुएल कुराकानीबाट व्यवसायलाई कसरी अघि बढाउन सकन्छि भनेर पनि विभिन्न योजनाहरू पनि बनायौं ।
चैतबाट बन्द गर्नुपरेको काम असारबाट हामीले फेरि सुरु गर्यौं । असार १ गतेदेखि भने लकडाउन अलि खुकलो भयो अनि हामीले आफ्नो काम सुरु गर्यौ । पहिले जस्तै मानिसहरूले आफ्नो घरमा समस्या आएपछि फोन गरेर बोलाउनुहुन्थ्यो । हामी त्यो समस्या समाधानका लागि काम गर्थ्यौं । पहिले र अहिले समय बदलिएको छ । मान्छेहरु मान्छेसँग दूरी राखेर बस्नुपर्ने भएको छ । चिनेको व्यक्तिसँग त डराउने अवस्था छ भने अब झन् नचिनेको व्यक्तिसँग नडराउने त कुरै भएन । डर हामी काम गर्नेलाई पनि छ । गराउनेलाई पनि । हामीले सुरक्षित भएर काम र सेवा गरिराखेका छौं । अहिले काम गर्नेले पीपीई लगाउनुपर्छ भन्ने जस्तै भएको छ । पीपीई एक हिसाबले भन्ने हो भने चलनचल्तीको काम गर्दा लगाउने लुगा बनेको छ । तर हामीले गर्ने काम पीपीई लगाएर गर्न धेरै नै असहज हुने भएकाले लगाएनौ । हामीले पीपीई नलगाएर पनि सामाजिक दूरीमा रहेर माक्स, पन्जा प्रयोग गरेर काम गर्छौं । स्यानिटाइजर र डिस्इन्फेक्सन पनि आफै बोकेर जान्छौं र प्रयोग गर्छौं ।
अहिले हामो कतिपय ठाउँबाट पैसा लिन बाँकी छ । कतिलाई दिन बाँकी छ । हामो नियमित काम गर्ने १२ जनाको टिम भए पनि ४० भन्दा धेरै फ्रिल्यान्सरको रूपमा काम गर्नहुन्छ । अहिलेसम्म सबैले साथ पनि दिइराख्नु भएको छ ।
यो महामारी कसैले सोचेको पनि थिएन । अब यो कहिले अन्त्य हुन्छ कसैलाई थाहा छैन । तर यसबाट कामको हिसाबले केही नयाँ सिक्ने मौका पनि पाएको छु । भोलि व्यवसाय पूरै बन्द हुनुभन्दा अघि नै त्यसको समाधानका लागि केही उपायहरु बनाउनुपर्ने रहेछ । बचत गर्नुपर्ने रहेछ । विपत् होला र समाधान गरुँला भन्नुभन्दा पनि सधैं तयार बस्नुपर्छ भन्ने पाठ यसले पढायो ।
कहिलेकाहीँ कति कुरा नहुँदा त्यो बेला नराम्रो लागे पनि पछि रामो हुने रै छ । जस्तै चैतको अन्तिमदेखि नयाँ ठाउँमा सर्ने भनेर सोच बनाएका थियौं । तर भनेको जस्तो अफिसका लागि ठाउँ पाइरहेका थिएनौं । ठ्याक्ककै लकडाउन भयो । यदि अर्को ठाउँमा कोठा पाएर अग्रिम पेमेन्ट गरेको अवस्थामा कोठा सर्न नपाएको भए दुईतिरै भाडा तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यो हिसाबले केही बचत चाहिं भयो भन्ने लाग्छ ।
मानिसहरू भन्छन् नि ‘जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ’ । कहिलेकाहीँ मलाई पनि त्यस्तो नै लाग्छ । लकडाउन हुँदा मान्छेहरुले आफ्नो घरमा बस्ने समय पाउनुभयो । आफ्नो घरमा भान्सादेखि लिभिङ रुम राम्ररी नियाल्दा के समस्या छ त्यो पत्ता लगाउनुभयो । घरमा नै धेरै समय बिताउनुभएकोले घरप्रति अझै बढी चासो बढ्यो । घरको रेखदेख गर्ने समय पाउनुभयो । अनि कतिले हामीलाई आफ्नो घरको केही समस्यामा काम गर्ने अवसार पनि दिनुभयो । व्यवसाय पहिलाको जस्तो एकदमै रामो त छैन । तर यो अवस्थामा यतिको कामलाई राम्रो भन्नुपर्छ । स्थिति अलिक सहज हुँदै गएपछि धेरै काम गर्न पाउनेछौं भन्ने लागेको छ ।
कोरोना र लकडाउनबाट केही आर्थिक नोक्स्सानी त भयो तर पनि यो कोरोनाले दिएको पीडाबाट व्यवसायलाई उठाएर अघि लैजान सक्छौं भन्ने आँट छ । अहिले व्यवसायी फैलाउने अवसर पनि छ । आत्मविश्वासका अघि बढ्दैछौं ।
यो कथा महेश तिमिल्सिनासंग गरीएको कुराकानीमा रहेर अनुषा स्वाँरले लेख्नु भएको हो ।
हस्पिटलमै क्वारेन्टाइनमा बसेर काम गरे